“Tallo qaran horaa loo gaadhay mid kale oo la yeelanayaana ma jirto | Salaan Media
“Tallo qaran horaa loo gaadhay mid kale oo la yeelanayaana ma jirto
Hargeysa, (SM)- Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa jawaab ka bixiyay eedaymo uu dhawaan xukuumadda u jeediyay Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe.
Sidoo kale waxa uu Wasiir ku-xigeenku ka hadlay talo qaran oo uu ku baaqay Guddoomiyaha UCID, isagoo xusay inaanay Somaliland talo qaran u baahnayn, isla markaana ay hore u gaadhay talo, kuna samaysatay dastuurka qaranka u yaalla.
Wasiir ku-xigeenka oo u maanta warramay shabakada Somalilandtoday, waxa uu tilmaamay in Somaliland wakhtigan ay marayso heerkii ugu fiicnaa, isla markaana ay caalamka ka rajaynayso aqoonsi. Waxaanu yidhi isagoo ka hadlaya arrimahaas.“Dalku waa dalkaa ay dawladdiisu hadda tahay dawladdii ugu waxqabadka badnayd, waa dawlad maanta la ogyahay meeqaamka siyaasadda gudaha iyo dibada ay dalka soo gaadhsiisay, waa dal nabad ah, xor ah, saakana dunida uga fadhiya inay aqoonsadaan ee maaha dal xumaanta intaa leeg lagu tilmaami karayo.”
“Eedaamayaha uu guddoomiyuhu uu soo jeedinayaa waa inay u ku fadhiyaan micno, xaqna wuu u leeyahay inuu waxa dhaliilo, waayo waa guddoomiye xisbi mucaarid, maanta waa la ogyahay maqaamka ay dawladdu ka ciyaartay siyaasadda arrimaha dibada iyo ta gudahaba.” Wasiirku waxa kale oo si faah-faahsan uga hadlay shirka talo qaran ee uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga Ucid Eng. Faysal Cali Waraabe, kaasoo uu sheegay in shacabka Somaliland ay hore talo-qaran u yeesheen, taladaas qarana ay tahay dastuurka u yaalla dalka, waxaanu yidhi. “Shirkaa waxaa uu guddoomiyuhu ku tilmaamay shir talo qaran ah tallo qarana horaa loo gaadhay taladaasina waa dastuurka ay leedahay jamhuuriyadan Somaliland dastuurkaa hagajintiisa iyo fulintiisaba isagaa tilmaama cida awooddaha leh ee wax ka badasha, talo aan dastuurkaa ahayn oo dalkani yeelanayaana ma jirto.” ayuu yidhi Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta Md. Cabdilaahi Cukuse.